समाचार पोर्टल चलाउने हो ? असाध्यै राम्रा यी डोमेनसहितको प्याकेज विक्रीमा छन् (मूल्यसहित)
ARCHIVE, OFF THE BEAT » समाचार पोर्टल चलाउने हो ? असाध्यै राम्रा यी डोमेनसहितको प्याकेज विक्रीमा छन् (मूल्यसहित)
काठमाडौँ- पछिल्लो समय पत्रपत्रिका, टेलिभिजन वा रेडियोसमेत अनलाइनकरण भइरहेका छन् । विभिन्न समाचार पोर्टलहरु खुलीरहेका छन् । यसैबीच हरेकखाले मिडियाहरुपनि अनलाइनमा आउने क्रम जारी छ । सजिलो प्रयोग, ठुलो पहुँच र फेसबुक, एडसेन्स जस्ता माध्यमबाट सजिलाई पैसा कमाउने माध्यम भएकाले पनि अनलाइनप्रति क्रेज बढीरहेको छ । यहि अनलाइनप्रति धेरैको क्रेजका कारण डोमेनहरु बुक हुने क्रम बढ्दो छ ।यतिसम्मकि अहिले नेपालमा थुप्रै डोमेन बुक गरी त्यसलाई पुन: विक्री गर्ने चलन पनि बढेको छ । यसैबीच आज हामी कुन कुन डोमेन भएको वेव साइट कति-कतिमा विक्रीमा छ भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्दैछौं ।
यी डोमेनको अधिकार प्रात कम्पनीका अनुसार यी डोमेन प्रयोग गरेर वर्डप्रेस वा आफ्नै सीएमएस प्रयोग गरिएका उच्च स्तरीय ग्राहकले भनेको जस्तै डिजाइनमा वेव साइट बनाएर कम्पनीले दिनेछ । कुनै कुनै डोमेन सार्है राम्रा र सेकेण्डरी मार्केटमा किनिएका हुनाले केहि महंगा पनि छन् । यी हुन् विक्रीमा रहेका समाचार पोर्टलका लागि काम लाग्ने डोमेनहरु
१. नयाँशक्ति न्यूज डटकम : www.nayashaktinews.com
मूल्य रु : ६०००० (वेव साइट + १ बर्षको होस्ट र मेन्टेनेन्स)
२. नयाँशक्ति खबर डटकम : www.nayashaktikhabar.com
३ .इलोकान्तार डटकम : मूल्य रु : www.elokantar.com
४. नयाँ सुर्य डटकम www.nayasurya.com
५.नयाँ शक्ति पोस्ट डटकम www.nayashaktipost.com
६.आर्थिक समाचार डटकम www.arthiksamachar.com
७. अर्थ संवाद डटकम www.arthasambad.com
९. अर्थखबर डटकम www.arthakhabar.com
मूल्य रु : १६०००० (वेव साइट + १ बर्षको होस्ट र मेन्टेनेन्स)
१०.आर्थिक बहस डटकम www.aarthikbahas.com
११. अर्थ बहस डटकम www.arthabahas.com
१२.कान्तिपुर बिज डटकम www.kantipurbiz.com
१३.एभिन्यूज खबर डटकम www.avenueskhabar.com
१४.कस्मेटिक पसल डटकम www.cosmeticpasal.com
मूल्य रु : १६०००० (वेव साइट + १ बर्षको होस्ट र मेन्टेनेन्स, इ कमर्श )
१५. कपडा पसल डटकम www.kapadapasal.com
१६.आर्थिक मिडिया डटकम www.aarthikmedia.com
१७. बिजमति डटकम www.bizmati.com
१८. बिजसञ्चार डटकम www.bizsanchar.com
१९. मेरोबिज डटकम www.merobiz.com
२०. आर्थिक पोष्ट डटकम www.aarthikpost.com
२१ हाम्रो बिज डटकम www.hamrobiz.com
२२. द नेप्लिज टाइम्स डटकम www.thenepalesetimes.com
२३. हाम्रो मकवानपुर् डटकम www.hamromakawanpur.com
२४. चिया चौतारी डटकम www.chiyachautari.com
२५.नेप्लिज पोस्ट डटकम www.nepalesepost.com
२६.आर्थिक खबर डटकम www.aarthikkhabar.com
२७. अनलाइन टिभी अन्नपूर्ण डटकम www.onlinetvannapurna.com
२८. आजको अर्थ डटकम www.aajakoartha.com
(यी डोमेनमध्ये कुनै पनि डोमेन मात्र पनि किन्न सकिनेछ भने कुनै डोमेन प्याकेजमा मात्र उपलब्ध छ । अन्य जानकारीका लागि ९८५१०१७९१४ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।)
तपाईंसँग पनि कुनै डोमेन छ भने कमेन्ट गर्नुहोला ।